यसरी खोलियो, ११ वर्षसम्म बन्द भएको मुख - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
यसरी खोलियो, ११ वर्षसम्म बन्द भएको मुख
काठमाडौँ । काभ्रेकी निशा राना मगरको ११ वर्ष अगाडि साथीसँग खेल्ने क्रममा लडेर मुखमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।
लामो समयको उपचारपछि घाउ ठीक त भयो तर क्रमशः उनको मुख बन्द हुँदै गयो । हाल निशा १९ वर्षकी भइन् । उनका परिवारले धेरैवटा अस्पतालमा उपचारका लागि देखाए तर समस्या समाधान हुने कुनै आधार देखिएन । उनका परिवारले अन्तिममा नेपाल मेडिकल कलेज जोरपार्टीमा लगे बरिष्ठ दन्तरोग विशेज्ञ डा निरज पन्तको टोलीले उनको उपचार सुरु गर्यो ।
ट्रमाको समस्याले क्रमशः बन्द हुँदै गएको मुख बोल्न र खानेकुरा निल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । ‘चिकित्सकीय भाषामा यो समस्यालाई यङ्कायोलोसिस भनिन्छ । यस्तो समस्या दुर्लभ रूपमा हुनेगर्छ । यो समस्याको समाधान गर्न सक्नु निकै ठूलो चुनौती हो ।’ उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
डा. निरज पन्तका अनुसार उनको मुख खुल्दैन थियो । भित्रभित्र आवाज आउँथ्यो । खानेकुराहरू झोल मात्रै निल्न सक्ने अवस्था थियो । खानेकुराको स्वाद थाहा पाउन सम्भव नै थिएन । उनको हिजो सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएको छ ।
नयाँ जीवन पाएँ
बोल्न र नर्मल खानेकुरा खान नसक्ने अवस्थामा पुगेकी निशा शल्यक्रियापछि नयाँ जीवन पाएकोमा दङ्ग छिन् । धेरै अस्पताल चाहार्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि नेपाल मेडिकल कलेज आएको बताउँछिन् । अहिले आफू ठीक भएको उनको तर्क छ । निशा विगतमा झै बोल्न र नर्मल खानेकुरा खान सक्ने भएकी छन् ।
उनको उपचार डा. निरज पन्त डा. कुशल विम्ब डा. अन्जनी भट्टराई र डा. सुमितकुमार सिंहले गरेका थिए ।
सुहानाको छातीको मोबाइल नम्बरले जथाभावी फोन आएर हैरान ! (तस्बिरहरु सहित)
यि फलफूल जस्को आकार मानब अंगसंग मिल्दछ, जसले गर्दछ शरिरमा यस्तो फाईदा
जापानी भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ ? यो पनि पढ्नुहोस्
बिहेको एनिभर्सरीकै दिन बाबु बने आर्यन सिग्देल
किरात याक्थुङ चुम्लुङ जापानको चौथो महाधिवेशन मे ५ मा , नागोयमा हुने
वाटा(WATA) अन्तर्राष्ट्रीय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा भाग लिन, नेपाली खेलाडीहरु जापान आईपुगे, ओसाकामा भव्य स्वागत ( फोटो सहित)
टोकियोको हिगासी ईकेबुकुरोमा भयानक सडक दुर्घटना, २ को मृत्यु १० घाईते
हिरासतमै किशोरको मृत्यु : रातारात पोस्टमार्टम , प्रहरीले कुट्दा ज्यान गएको हुनसक्ने